Kenya oo u digtay Soomaalida ka agdhow saldhigyada kooxda Al-shabaab ee Jubbooyinka iyo Gedo – Radio Daljir
Kenya oo u digtay Soomaalida ka agdhow saldhigyada kooxda Al-shabaab ee Jubbooyinka iyo Gedo
Nofeembar 8, 2013 4:53 b 0
Nairobi, November 8, 2013 – Dowladda Kenya ayaa xoojisay qorshe ay ku damacsan tahay in ay weeraro kula beegsato meelaha ay Soomaaliya ka joogaan kooxda Al-shabaab, waxaa si gaar ah loo bartilmaameedsan doonaa gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Afhayeenka ciidamada Kenya ee Soomaaliya Emmanuel Chirchir ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ka foggaadaan meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin Al-shabaab iyo weliba bartaha kantaroolada ee kooxda.
Afhayeen Chirchir ayaa yiri ??Waxaan weydiisanaynaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada Gedo, Jubbad Hoose iyo Jubbada dhexe inay ka fogaadaan saldhigyada, xeryaha iyo jid-gooyooyinka ay ku sugan yihiin xoogagga Al-shabaab.?
Kenya waxay sheegtay in ay qorshaha ugu jirto meelaha ka baxsan Gedo, Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe ay duqayn ka gaystaan, waxaa uu baaq u diray afhayeenku guud ahaan shacabka koonfurta dalka oo idil.
Kumanaan Askari oo ka mid ah meleteriga Kenya ayaa jooga Soomaaliya, kooxda Al-shabaab ayaa inta iyana weeraro ka geysta meelaha muhiimka ee dalka Kenya, khatar weyn.